မျက်စိနာခြင်း အမျိုးမျိုး - Hello Sayarwon
မျက်စိဖိုးအလွှာရောင်ခြင်း (သို့) မျက်စိနာခြင်းဆိုတာ မျက်သားအဖြူနဲ့ မျက်ခမ်းအတွင်းပိုင်းကြားက အလွှာရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်စိနာခြင်းဟာ ဓါတ်မတည့်ခြင်း၊ ကလမိုင်ဒီးယားပိုး ဝင်ခြင်း၊ ဘက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စပ်၊ မှို၊ ကပ်ပါး စတဲ့ ပိုးများဝင်ခြင်း၊ အဆိပ်ဓါတ် ထိတွေ့ခြင်း စတဲ့ပြသနာတွေကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မျက်ကပ်မှန်ကို ဖြစ်သလိုတပ်ဆင်ရင်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတရံမှာ မျက်စိနာခြင်းဟာ လူတစ်ဦးကနေ တစ်ဦးကို ပစ္စည်းအတူသုံးရာကတဆင့်၊ လက်မဆေးဘဲ ထိတွေ့မိရာကတဆင့် ကူးတတ်ပါတယ်။ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ နှာချေခြင်း တို့ကြောင့် ပိုဆိုးတတ်ပါတယ်။
ဘယ်အရာက ဖြစ်ပွားစေသလဲဆိုတာပေါ် မူတည်ပြီး မျက်စိနာခြင်း အမျိုးအစားများစွာ ရှိပါတယ်။ အောက်ပါအချက်များဟာ အဖြစ်များတဲ့ အမျိုးအစားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အဖြစ်မြန်ပြီး မျက်ရည်များစီးကျပြီး မျက်လုံးဟာ နီနေတတ်ပါတယ်။ အနည်းငယ် နာတတ်ပါတယ်။ ကူးစက်လွယ်ပြီး အစုလိုက် အပြုံလိုက် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီပြသနာရှိသူများဟာ အလင်းရောင်ကို မခံနိုင်ခြင်း၊ မျက်စိထဲ တခုခုဝင်နေသလို ခံစားရခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ရုတ်တရက် ဖြစ်ပွားကာ ကူးစက်လွယ်ပြီး နာကျင်နေတတ်ပါတယ်။ staphylococcus နဲ့ streptococcus စတဲ့ ဘက်တီးရီးယား ၂မျိုးကြောင့် အဖြစ်များပါတယ်။ မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း၊ အရေပြား၊ ဒါမှမဟုတ် တခြားသူဆီကနေ ကူးစက်တတ်ပါတယ်။ မျက်လုံးကနေ ပြည် ဒါမှမဟုတ် မျက်ဝတ်များ ထွက်တတ်ပါတယ်။ မျက်လုံးနီတတ်ပါတယ်။ ကလေးတွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။
နာတာရှည်ဖြစ်ပွားတတ်ပြီး နာကျင်ပြီး ယားယံတတ်ပါတယ်။ ရောဂါရှိသူနဲ့ လိင်ဆက်ဆံမိရင် ဖြစ်တတ်ပြီး လိင်မှတဆင့် ကူးစက်ရောဂါလို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ မျက်လုံးကနေ မျက်ဝတ်များထွက်တတ်ပြီး နီရဲနေတတ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါကို ကုသဖို့ doxycycline ဒါမှမဟုတ် erythromycin စတဲ့ ဆေးဝါးများကို ပေးပါတယ်။
– ဓါတ်မတည့်မှုကြောင့် ဖြစ်ပွားခြင်း။
ရုတ်တရက် ပြင်းထန်စွာ ဒါမှမဟုတ် သိပ်မပြင်းထန်ဘဲ ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။ ရင်ကျပ်ပန်းနာ၊ ဓါတ်မတည့်မှုကြောင့် ဖျားနာခြင်း၊ နှင်းခူစတဲ့ ဓါတ်မတည့်ခြင်း ဖြစ်တတ်သူတွေမှာ ဖြစ်နိုင်ခြေ များပါတယ်။ မွှား၊ ဝတ်မှုန် စတာတွေကလည်း ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ မျက်ရည်ကျခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ မျက်စိနာလိုက် ပျောက်လိုက်ဖြစ်ခြင်း စတာတွေ ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတရံ ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာ မျက်သားဟာ ရောင်ရမ်းနေပြီး မျက်လုံးအဖြူဆန်ပေါ်မှာ အရည်ကြည်ဖုလို ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
Types of conjunctivitis types. youreyeguide.co.uk/conjunctivitis-types.html. Accessed in February 26, 2017.
Pinkeye (conjunctivitis) in pictures: Types, Treatments, and more-WebMD. wedmd.com/eye-health/ss/slideshow-pinkeye. Accessed in February 26, 2017.
Differentiating types of conjunctivitis – Contemporary Clinic – Pharmacy Times. contemporaryclinic.pharmacytimes.com/news-views/differentiating-types-of-conjunctivitis. Accessed in February 26, 2017.